Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-anyanisi eluhlaza yonke ngoku iyakhunjulwa ngenxa yeSalmonella
Amatswele akrwada apheleleyo (abomvu, atyheli, namhlophe) athunyelwa kumazwe angaphandle yiProsource Produce LLC yaseHailey, Idaho, imveliso yelizwe laseChihuahua, eMexico, iyakhunjuzwa kwindawo yentengiso ngenxa yokungcoliseka okunokwenzeka kweSalmonella.
Abathengi akufuneki batye iimveliso ezikhunjulwayo ezichazwe ngezantsi okanye ukutya okuqulethe la matswele akrwada. Abathengisi, abasasazi, abavelisi, kunye namaziko eenkonzo zokutya afana neehotele, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela, izibhedlele, kunye namakhaya abantu abalupheleyo akufuneki banike, basebenzise, ​​okanye bathengise iimveliso ezikhutshelweyo ezichazwe ngezantsi.
Ezi mveliso zilandelayo ziye zathengiswa e-Ontario naseQuebec kwaye zinokuthi zihanjiswe kwamanye amaphondo kunye nemimandla.
Ezi mveliso zisenokuba zithengisiwe ngobuninzi okanye ngeepakethe ezincinci ezineleyibhile okanye zingenazo kwaye zisenokungabi nophawu olufanayo okanye amagama emveliso njengoko kuchaziwe ngezantsi. I-CFIA iya kuqhubeka nophando lwayo kwabanye abarhwebi abanokubakho kwaye ukukhumbula okongezelelweyo kunokulandela.
uhlobo imveliso ubungakanani UPC Codes ulwazi olongezelelweyo
IBig Bull Peak Fresh Provement Sierra Madre Produce Markon First Crop Markon Essentials RioBlue ProSource Rio Valley Imperial Fresh Amatswele abomvu Amatswele amhlophe Iingxowa zeMesh: 50 lb 25 lb 10 lb 5 lb 3 lb 2 lb Iikhathoni: 50 lb 40 lb 25 lb 10 lb 5 lb Eziguqukayo Zonke iimveliso
31, 2021. Imveliso yelizwe
Ukuba ucinga ukuba uye wagula ngenxa yokutya imveliso ekhunjulwayo, fowunela ugqirha wakho.
Jonga ukuze ubone ukuba unazo na iimveliso ezibuyiselweyo ekhayeni lakho okanye kwindawo yakho. Iimveliso ezikhunjulwayo kufuneka zilahlwe ngaphandle okanye zibuyiselwe kwindawo apho zithengwe khona. Ukuba akuqinisekanga ngetswele elikulo, jonga kwindawo othenge kuyo.
Ukutya okungcoliswe yiSalmonella akunakujongeka okanye kunuke konakale kodwa kusenokukwenza ugule. Abantwana abancinci, abasetyhini abakhulelweyo, abantu abadala kunye nabantu abanamajoni omzimba abuthathaka banokufumana usulelo oluyingozi kwaye ngamanye amaxesha lubulalayo. Abantu abasempilweni banokuba neempawu zexeshana ezinjengomkhuhlane, intloko ebuhlungu, ukugabha, isicaphucaphu, ukuqaqanjelwa sisisu kunye norhudo. Iingxaki zexesha elide zingabandakanya isifo samathambo.
• Funda ngakumbi malunga neengozi zempilo
Oku kuphinda kukhunjulwe kukubuyiselwa kwelinye ilizwe. I-Arhente yoHlolo lokuTya yaseKhanada (CFIA) iqhuba uphando lokhuseleko lokutya, olunokukhokelela ekukhunjulweni kwezinye iimveliso. Ukuba ezinye iimveliso ezinobungozi obuphezulu ziyakhunjulwa, i-CFIA iya kwazisa uluntu ngokuhlaziywa kweZilumkiso zokuKhumbula ukutya.
I-CFIA iqinisekisa ukuba umzi-mveliso uyayisusa imveliso ekhunjulwayo kwindawo yentengiso.
Akukhange kubekho zigulo zixeliweyo eCanada ezinxulumene nokusetyenziswa kwezi mveliso.